अति यौन सुखको खोजीले कसरी बर्वाद भयो यी महिलाको जीवन | Rajmarga
अति यौन सुखको खोजीले कसरी बर्वाद भयो यी महिलाको जीवन
पछिल्लो समय वैवाहिक सम्बन्ध टुट्नको आम कारण सेक्समा कमी हुने गरेको पाइएको छ। कुनै एक पार्टनर अर्को पार्टनरलाई सेक्सुअल्ली सन्तुष्ट पार्न नसक्दा वैवाहिक जीवन टुट्ने गरेको छ । तर, तपाईलाई विश्वास नलाग्ला कि यदि यौन जीवनमा सेक्स अति भयो भने पनि सम्बन्ध टुट्नुको कारण बन्दछ । एक जना महिलाको मागी विवाह भएको थियो, तर कसरी आवश्यकताभन्दा बढी सेक्सको चाहनाले उनको जीवन बर्वाद भयो । उनको अनुभव यस्तो छ–
मेरो मागी विवाह भएको थियो । त्यसैले मसँग विवाहअघि श्रीमानलाई बुझ्ने बढ समय थिएन । किनभने हाम्रो कोर्टशीप पिरियड मुस्किलले दुई महिनाको थियो । निश्चयनै यति कम समयमा कसैका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउनु सम्भव थिएन । जब मेरो विवाह भयो तब मलाई थाहा थिएन कि कोसँग वचनबद्धता हुन गइरहेकी छु ।
हाम्रो विवाहको पहिलो रात अर्थात सुहागरातमा जे भयो त्यो कुनै परीको कथाजस्तै थियो । मलाई थाहा थियो कि विवाहको पहिलो रात अधिकांश मानिस सेक्स गर्दछन् । र, म पनि यसैको अपेक्षा गरिरहेकी थिएँ । मेरा श्रीमान प्रेमपूर्वक मेरो हात समाते, मेरो कानमा मीठामीठा कुरा गरे । उनले मलाई बताए कि मलाई कति धेरै माया गर्छन् र उनको यतिधेरै माया र हेरचाह देखेर म पनि कुनै सानो बच्चाजस्तै उनको हात समातेर उहाँसँगै सुतेँ ।
विवाह भएको तीन महिना नहुँदै मलाई यो कुरा महशुस भएको थियो कि मेरा श्रीमान निकै कामुक र जोशिलो व्यक्ति हुन् । हरेक रात मसँग यौन सम्पर्क गरेपछि पनि उनी उत्तेजित रहन्थे । पुनः दोहोराउने मुडमा हुन्थे । कहिलेकाँहि त यस्तो लाग्थ्यो कि उनी मबाट केही कुरा लुकाइरहेका छन् । एक रात शारीरिक सम्पर्ककै क्रममा उनले निकै कामुक पारामा मेरो कानमा भने कि उनी बान्डेज ट्राइ गर्न चाहन्छन् । मैले पहिला पनि बीडीएसएमका बारेका सुनेकी थिएँ । तर, मलाई विश्वास थिएन कि मानिसहरु वास्तवमै यस्तो कुरा गर्दछन् । पहिला त म केही स्तब्ध भएँ तर मलाई लाग्यो कि अभ्यास गर्नुमा हानी नै के छ र ?
जब मेरा श्रीमानलाई यो कुरा महशुस भयो कि म उनको माग पूरा गर्न लागेकी छु त ब उनको कामुकता र वासना झनै बढ्न थाल्यो । पहिला जहाँ हामी रातमा एकपटक यौन सम्पर्क गर्दथ्यौ, अब हामी एक दिनमा ३–३ पटक गर्न थाल्यौ । बिहान हुँदा जब म आफ्नो आँखा खोल्न पाउँथेँ, श्रीमानको माग मेरो शरीरमाथि हुन्थ्यो । सुरुवातमा त साँझको प्रतिक्षा गर्दथेँ किनभने साँझ हाम्रो जीवनको सबैभन्दा पैशनेट समय हुन्थ्यो । तर सेक्सबिना कहिले पनि हाम्रो रात अन्त्य हुँदैन थियो । म विस्तारै विस्तारै थाक्न थालेँ र मेरो आँखाबाट निद्रा गायव हुन थाल्यो ।
विवाह भएको एक वर्षपछि मलाई थाहा भयो कि म आफ्नो श्रीमानको बढ्दो यौन चाहना पूरा गर्न सक्दिनँ । र, म डिप्रेशनमा गएँ । मलाई लाग्यो मभित्रै कुनै कमी छ । मैले आफ्नो डरका बारेमा आफ्नो श्रीमानलाई बताएँ । मैले श्रीमानसँग भने कि मलाई उनका साथ सेक्स गर्न राम्रो लाग्छ तर एकै दिनमा यतिधेरै सेक्स गरेका कारण म आनन्द लिन सकिरहेकी छैन । सुरुवातमा त उनले भने कि मेरो कुरा बुझिरहेका छन् तर फेरि उनले मलाई सेक्सोलजिस्टसँग सम्पर्क गर्ने सुझाव दिए ।
मेरो धेरैपटकको आग्रहपछि मेरा श्रीमान दिनमा एकपटक मात्र यौन सम्पर्क गर्न राजी त भए तर फेरि पनि उनले जब कार्यालयमा हुन्छन् तब फोन सेक्स गर्ने कुरा गरे । पहिला त मलाई यो कुरा विचित्रको लाग्यो तर फेरी मलाई लाग्यो कि मेरा श्रीमान मेरा लागि सम्झौता गरिरहेका छन् भने मैले पनि उनको कुरा मान्नुपर्छ । यद्यपि उनी मात्र फोन सेक्समा मात्रै रोकिएनन् । उनले भने कि वेभक्यामको प्रयोग गरेर सेक्स गरौ । जब मैले उनको कुरामा ध्यान दिइनँ तब त्यसरात उनले मात्र ३ घण्टाभित्र मसँग जबरजस्ती २–३ पटक सेक्स गरे ।
केही समयपछि मैले मेरो श्रीमानको बढ्दो मागका सामु ‘हुन्न’ भन्न सिकेँ । म सेक्स त्यतिबेला गर्दथेँ जब म गर्न चाहन्थेँ । अब म कुनै सिधासाभा नयाँ दुलही थिइनँ । जब मेरा श्रीमानले देखे कि उनको आग्रह र धम्कीमा मैले ध्यान दिइरहेकी छैन तब उनको व्यवहार मप्रति रुखो हुन थाल्यो ।
एक दिन मेरा श्रीमानले कार्यालयबाट मलाई फोन गरे र भने कि उनी मेरासाथ यसबारेमा कुरा गर्न चाहन्छन् । उनी कार्यालयबाट चाँडै घर आए र मसँग आफ्नो विगतका सबै कुरा भने जुनसँग म अनविज्ञ थिएँ । उनले मलाई बताए कि कसरी उनको पूर्व गर्लफ्रेन्ड पनि उनको तिब्र र उत्तेजित कामेच्छाका कारण समस्यामा थिइन् । र, कसैले पनि उनलाई सन्तुष्ट पार्न सकिरहेको थिएन । उनले आफ्नो व्यवहारका लागि मसँग माफी पनि मागे तर साथै यो पनि भने कि उनी आफ्नो यो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् ।
पछि मैले कतै पढेँ कि वैवाहिक सम्बन्ध टुट्नुको ठुलो कारण सेक्स पनि हुन्छ । हाम्रो विवाह भएको दुई वर्ष भइसकेका थियो । हामी एउटै छानामुनि अपरिचितजस्तै बसेका थियौ । अन्ततः मैले निर्णय गरेँ कि हामी यो सम्बन्ध अन्त्य गर्दैछौ । कहिलेकाँहि कुनै सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनका लागि मात्र प्रेम मात्रै काफी हुँदैन, शरीर सेक्सुअल कम्पैटिबिलिटी पनि आवश्यक हुन्छ । एजेन्सी
Previous post: एउटा सेल्फीले हत्यारालाई यसरी जेलको हावा खुवायो
Next post: वर्षौंपछि श्रीमतीलाई देख्न पाउँदा शर्मा र विक दंग
यसकारण नियमित सेक्समा जोड दिनुहोस्
बाइक चलाउनु हुन्छ ? यो खबर अवश्य पढ्नुस्